China AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oiri Cartridge Inotungamira Yemahara uye Hapana Heavy Metal ine Kwakachena Kunonaka uye Big Vapor fekitori uye vagadziri | Alphagreen vape
AT01 Nyore Dhinda Vape CBD / THC / Delta 8 Oiri Cartridge Inotungamira Yemahara uye Hapana Inorema Simbi ine Kwakachena Kunonaka uye Big Vapor
Ipfupi Tsananguro: Isu tinopa AT01 Nyore Press Vape CBD / THC / Delta 8 inoraswa vape katuriji. Iine kuravira kwakachena uye hukuru hwakakura. Tine nyanzvi R&D timu uye yakanaka pre-saling, mushure-saling sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvine mhinduro yakanaka uye mhando yepamusoro. Iwo mutemo wekuti hunhu hupenyu. Tichitarisira kushandira pamwe newe.
FOB Mutengo: US $ 0.78 - 0.88 / Chidimbu
1. Chigadzirwa Nhanganyaya ye AT01 CBD / THC Vape Cartridge
Muchina wekudhinda AT01 ndiwo mamiriro akafanana needu epakutanga katuriji AT01, asi ndiyo inosimudzira imwe ichienzaniswa neAT01. Nekuti iri neakasiyana tip-Nyore Press Cap. AT01 macartridge ane twist cap uye pane zvakafanira kumisikidza basa rekuvhara tip. AT01 Easy Press cartridge ine yekudhinda chivharo, saka chengetedza rako rebasa uye nguva. Zviri nyore uye nyore.
Iyo tip iri yakajeka kana grey nekukasira Asi mamwe mavara anogona zvakare kugadziriswa neMOQ ye3,000. Isu tinotsigirawo logo kudhinda uye kurongedza dhizaini.
Zvinotonyanya kukosha, AT01 iri nyore yekudhinda katuriji ine mwero wekudonha zvishoma. Inodzvanya zviri nyore asi haigone kuvhura zvekare. Naizvozvo, haunetseke nezvekudonha nekuparadza mafuta ako.
2. Chigadzirwa Paramende (Rondedzero) yeiyo AT01 CBD / THC Vape Cartridge
CBD / THC vape katuriji / Nyore Press AT01
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm, Tsika Saizi）
3. Chigadzirwa Chigadzirwa uye Kushandiswa kweiyo AT01 CBD / THC Vape Cartridge
——Easy Press Tip, tinya nemaoko panzvimbo pemuchina.
4. Kugadzirwa Ruzivo rweiyo AT01 CBD / THC Vape Cartridge
Tip Totally girazi tip, hapana plastiki. Chengeta maziso pahutano hwako
② Dzvanya pamhando, nekuti hapana dhizaini inodonha.
③ Hapana heavy metal central post (Kana iwe uchida kuziva njodzi dzesimbi inorema, ndapota verenga chinyorwa pazasi), dzakasiyana tip yekusarudza.
④ Yakakwira oiri yekumwa mwero, sutu yemafuta akasiyana eukobvu.
⑤ Tsika logo kudhinda uye rakasiyana tip kara, ita rako chairo.
Ndeapi njodzi dzesimbi inorema kuvanhu?
Ngwarira simbi dzinorema dzinogona kukonzera cancer
Munhau, tinogona kazhinji kuona kuti simbi dzinorema dzinogona kukonzera kukuvadza kumuviri wemunhu, kunyanya kusvibiswa kwesimbi inorema munharaunda, izvo zvinogona kurwarisa vanhu uye kutokonzeresa gomarara. Uye simbi dzinorema dziri kwese kwese muhupenyu, kwete kungosvibisa kwezvakatipoteredza, kunyangwe iwo macosmetics anoshandiswa neshamwari dzechikadzi ane simbi dzinorema. Zvinofungidzirwa kuti kukuvadza kwaro kumuviri wemunhu kwakanyatsovanzwa, hazvisi nyore kuti zvionekwe, uye kune mhando zhinji dzesimbi dzinorema, uye kukuvara kwemhando dzakasiyana dzesimbi inorema kumuviri wemunhu kwakasiyana zvakare. Ipapo ngatiendei nemunhu wese kuti tione kuti ndedzipi njodzi dzesimbi inorema
Tungamira, lead ndiyo imwe yesimbi inorema zvine chepfu mukushatisa kwesimbi inorema. Kana yangopinda mumuviri wemunhu, inozokuvadza zvakananga maseru ehuropi hwemunhu, inokonzeresa kugomara kwepfungwa, kukonzera uropi kufa uye kuora mwoyo kune vakwegura, uye kunyange kuisa njodzi kenza. .
Mercury, kushandisa mercury kunopinda muchiropa, uye ndokukuvadza kuona uye tsinga dzouropi. Mvura yacho ine zvisaririra zvakaenzana zve mercury. Kana ichitsiva mvura ine mercury kwenguva yakareba, inokonzeresa chepfu isingaperi.
Chromium, kukuvadza kwakanyanya kunokonzera kukanganisika kwepfungwa uye kupera kwemaoko.
Arsenic, iyi simbi inorema inogona kukonzeresa ganda kuita pigment uye isina kujairika keratinization.
Aldehydes zvinogona kukonzera itsvo kusagadzikana uye zvemwoyo uye cerebrovascular hosha. Njodzi inonyanya kukosha ndeyekukwira kweropa.
Cobalt inogona kukonzera radioactive kukuvara paganda.
Vanadium, iyo ine mhedzisiro pamoyo wemunhu nemapapu, inogona kukonzera isina kujairika plasma metabolism.
Antimony, sekobalt, ine radioactive kukuvara paganda.
Selenium, vanhu vakafuta zvakanyanya ne selenium vanotambura nechirwere chinotyisa.
Thallium zvinogona kukonzera kuwanda kweuropathy.
Manganese inogona kukanganisa mashandiro etachiona, uye zviri nyore kuwana hyperthyroidism.
Tin, senge lead, ine chepfu zvakanyanya uye inogona kukonzera cancer.
Ndinotenda kuti munhu wese ane imwe nzwisiso yenjodzi dzesimbi dzakawanda kudaro. Simbi dzinorema dzinokuvadza muviri wemunhu. Kukuvadza kwakanyanya ndekwekuti dzinogona kukonzera cancer uye nekuisa hupenyu panjodzi. Naizvozvo, isu tinofanirwa kukonzera kusvibiswa kwakakosha muhupenyu hwedu, kunyanya kusvibiswa kwesimbi inorema munharaunda, izvo zvinogona kukonzeresa simbi dzinorema kupinda muvhu nemvura. Kana vanhu vakasangana nemvura yakasviba nevhu, zvinokonzeresa chepfu isingaperi, inozotungamira kune mamwe matambudziko mumuviri. Zvirwere zvinotyisidzira hupenyu.
Pashure: YEMAHARA Bhatani Kumisikidza Inogadziriswa Voltage Palm Bhatiri ine 510 Thread, Inokodzera yeUniversal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Zvadaro: AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 Cartridge, Hapana Heavy Metal Inotungamira Yemahara neKuchena Kwakara uye Big Vapor
cbd vape katuriji
zvedongo cbd katuriji
isina vape katuriji
yakazadzikiswa cbd mafuta katuriji
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, 510 bhatiri, bhatiri vape chinyoreso, kuraswa vape chinyoreso, rechargeable vape peni, CBD vape chinyoreso, CBD mafuta vape kuraswa, Zvese Zvigadzirwa